Qofkii u horeeyey ee qaba xanuunka Albino ayaa ka mid noqday baarlamaanka Malawi. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Qofkii u horeeyey ee qaba xanuunka Albino ayaa ka mid noqday baarlamaanka...
Qofkii u horeeyey ee qaba xanuunka Albino ayaa ka mid noqday baarlamaanka Malawi.
Nin u dhaqdhaqaaqa Albino ayaa Khamiistii lagu dhaariyay baarlamaanka Malawi, waana markii ugu horreysay oo dal ay dadka Albinism-ka qaba ay la kulmaan takoor iyo dil.
Overstone Kondowe ayaa ku guulaystay doorasho ku celis ah bishii hore oo ka dhacday badhtamaha Malawi, taasoo ah dhacdo muhiim ah ka dib sanado badan oo dhibane ay dadkaasi ahaayeen.
“Anigoo ah qofka ugu horreeya ee albinism-ka ah ee loo doorto xafiiska noocan oo kale ah, waxaa jirta rajo weyn, maahan Malawi oo kaliya, laakiin adduunka oo dhan ayaa sugaya waxa aan samayn doono,” ayuu u sheegay AFP wax yar ka dib dhaarintiisa.
“Erayga ugu dambeeya ee aan u sheego dadka naafada ah, iyo gaar ahaan dadka albinism-ka, uma baahna inay is-hoosaysiiyaan,” ayuu yidhi.
“Waxayna u baahan yihiin inay si adag uga shaqeeyaan hadafkooda, waxaan u ahaanayaa tusaale iyaga ku dayasho leh, waxaanan ku dhiirigelin doonaa wax badan si ay u hiigsadaan meel sare,” ayuu raaciyay.
Malawi waxa soo gaadhay mowjado weeraro ah oo ka dhan ah albinos dabayaaqadii 2014kii.
Xilligii ugu sarreeyay ee weerarradii 2016, Kondowe wuxuu aasaasay Ururka Dadka Albinism-ka ee Malawi si ay ugu riixdo dawladda inay tallaabo qaaddo.
Amnesty International ayaa sheegtay in in ka badan 20 albinos lagu dilay Malawi tan iyo 2014-kii.
Afartii bilood ee la soo dhaafay, Amnesty waxa ay sheegtay in toddobo weerar oo ka dhan ah albinos la duubay, kuwaas oo isugu jira dil, qabri faragelin, isku day afduub, iyo gacan ka hadal.
Sida wadamada kale ee gobolka, xubnaha jirka ee albinos waxaa loo isticmaalaa caadooyin si ay u keenaan hanti iyo nasiib.
Qaar ka mid ah albinos ayaa sidoo kale lagu eedeeyaa inay yihiin “vampires” kuwaas oo u raadiya dhiigga bini’aadamka caadooyinka, mararka qaarkood waxay kiciyaan rabshado feejignaan ah oo aargoosi ah.
Madaxweyne Lazarus Chakwera ayaa Kondowe u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah ee dadka naafada ah. Kondowe sidoo kale waa gudoomiyaha hadda ee Midowga Afrika ee dadka qaba Albinism.
“Doorashada Overstone waa tallaabo weyn oo hore loogu qaaday ilaalinta xuquuqda aadanaha ee dadka qaba albinism-ka Malawi iyo guud ahaan gobolka Afrika,”
“Waxay muujinaysaa in macnaha takoorku uu si wanaagsan isu beddelayo dadka albinism-ka ee Malawina ay heli doonaan fursad ay dadka kaga mid noqdaan.”
Previous articleItoobiya: Golaha Ammaanka oo ku baaqay in la joojiyo colaadda
Next articleIsrael oo bilaawday daad gureynta qoysaska diblumaasiyiinteeda ku dhaqan Itoobiya